Sarimihetsika “Zavon’i Srebrenica” Mampiseho Ireo Olona Sisa Niangana Tamin’ny Vono Olona Mahatsiravina Indrindra Tao Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2015 9:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Български, 繁體中文, 简体中文, English
Samir Mehanović, Tale (Sary nalain'i Marta Vidal)
Raha jerena ny fandripahana ratsy indrindra tao Eoropa hatramin'ny Ady Lehibe faharoa, Lehilahy sy tovolahy Miozolomana 8000 no maty novonoin'ny miaramila Serba Bosniaka tao Srebrenica tamin'ny 1995. Taterin'i Alessandra Goio and Marta Vidal ny sarimihetsika iray vaovao mifantoka amin'ireo olona sisa niangana tamin'ny fandripahana tao Srebrenica, izay navoaka voalohany tamin'ny Fetiben'ny Filma Sarajevo faha-21 herinandro vitsivitsy lasa izay. Navoaka voalohany tao amin'ny Balkan Diskurs, tantanin'ny Foibem-pikarohana ny Aorian'ny Ady (PCRC), tetikasa nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices 2014 ity lahatsoratra ity. Navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nampahafantatra ny sarimihetsika fanadihadiana navoakany “Ny Zavon'i Srebrenica tao amin'ny efitrano fijerena sinema feno hipoka nandritra ny Fetiben'ny Filma Sarajevo faha-21 ny tale Bosniaka Samir Mehanović tamin'ny 17 Aogositra.
Milaza ny tantaran'i Mehmed, i Hatidža, i Ahmed ary i Zinahida, ireo efatra tsy maty tamin'ilay faritana ho heloka bevava ratsy indrindra natao tao amin'ny tany Eoropeana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ny sarimihetsika. Nandritra ny fito andro tamin'ny Ady Bosniaka tamin'ny Jolay 1995, Miozolomana Bosniaka maherin'ny 8.000 ao anatiny sy manodidina ny tanànan'i Srebrencia no maty novonoin'ny tafika Serba Bosniaka teo ambanin'ny fibaikon'ny Jeneraly Ratko Mladić.
Amin'ny fitantarana ny zavatra niainan'ireo mpilalao tamin'ity voina ity, mahatonga ny mpijery handinika ireo fanontaniana maro manan-danja momba ny olombelona, ​​fahatsiarovana ary ny famelan-keloka ny sarimihetsika.
Teo an-tsehatra miaraka amin'ireo mpilalao sasany ao amin'ny sarimihetsika ireo sisa niangana tamin'ny fandripahana tao Srebrenica sy ny fianakavian'ireo niharam-boina, noresahin'i Mehanović ny maha zava-dehibe ny fahatsiarovana an'i Srebrenica sy ny tokony hanorenana fanantenana ho an'ny taranaka hoavy ao Bosnia.
“Nanomboka nanao ity horonan-tsary ity aho 20 taona lasa izay”, hoy i Mehanović, lehibe tao Tuzla ary mbola mahatsiaro ny zava-nitranga tamin'ny Jolay 1995, raha nandao an'i Srebrenica, efa-polo kilaometatra miala ny tanànany ireo mpitsoa-ponenana maro. “Mihelingelina ny tsiaro. Voasokatra tsy mety mihitsy intsony fa manao randra-tarihana ny olana amin'ny alalan'ny fanatontosana ity horonantsary ity”, hoy izy nanampy.
Naniry ny hianatra momba ny fitantanana i Mehanović talohan'ny ady, saingy raha nanomboka ny ady, nanorina orinasa filalaovana tantara an-tsehatra izy “Raha nananontanona ny ady, nanatontosa fampisehoana tahaka ny “Ny Printsy Kely” izahay, hoy izy nahatsiaro.
Tamin'ny volana Mey 1995, nandositra ny fandripahana tao Tuzla i Mehanović, izay nahitana tanora teo amin'ny 71 teo namoy ny ainy tamin'izany, nandao an'i Bosnia izy tamin'ny volana Aogositra tamin'io taona io ihany ary nitady fialokalofana tany Ekaosy rehefa nasaina handray anjara tamin'ny Fetiben'ny Fandravahana tantara tsangana tao Edinburgh.
“Nankany Edinburgh aho ary nijanona tao, saingy tsy nitsahatra nifandray tamin'i Bosnia aho” hoy izy tamin'ny mpijery.
Tamin'ny 2013 izy nanatontosa ny “The Way We Played” (Ny fomba filalaovanay), sarimihetsika mikasika ireo ankizilahy roa samy hafa fiaviana ara-poko tamin'ny fiandohan'ny ady Bosniaka. Saingy ny nanetsika an'i Mehanović tamin'ny “Zavon'ny Srebrenica” dia avy amin'ny fanirinana hitantara ireo olona namoy ny ainy sy nanjavona.
Tranom-pirenena Fijerena Tantara An-tsehatra, Sarajevo (Credit: Marta Vidal)
Raha nanatontosa ny sarimihetsika izy dia nitarika fikarohana lalina momba ny fandripahana, izay nanokatra ny ratra taloha. “Nanontany ny hevitro amin'ny mahaolombelona izany”, hoy izy nanazava, ary nanery azy hanontany tena hoe: “Ratsy kokoa noho ny biby ve ny olona?” Na izany aza, nanome fanantenana ho azy ny fanatontosana ny fanadihadiana. “
“Ny zavatra mahafinaritra dia tsy nahatsiaro fankahalana aho tamin'ny filalaovana ny sarimihetsika”, hoy i Mehanović nanazava, nampiany hoe natoky izy fa nandray anjara lehibe tamin'ny sarimihetsika nataony ny famelan-keloka. Na dia namoy fianakaviana maromaro aza ny ankamroan'ireo mpilalao ny sarimihetsika ary nanatri-maso toe-javatra feno herisetra, dia mbola afaka mamela heloka sy nilaza fa tsy mikasa hamaly faty. “Tsy maintsy mamela heloka ny olona, tsy feno fankahalana izy ireo”, hoy ny tale.
Namoy fianakaviana 67 nandritra ny fandripahana i Mehmed Hodžić, iray amin'ireo mpilalao amin'ny sarimihetsika ary mpanao volo monina miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany roa lahy tao Srebrenica. Nifindra tany Sarajevo izy, saingy taorian'ny ady, nanapa-kevitra ny hiverina ao Srebrenica izy. Namariparitra izy fa efa milamina ny fiainana ao Srebrenica amin'izao fotoana izao, ary ara-dalàna tsara tahaka ny ao amin'ny tanàna kely hafa.
Eny, raharaha tokony tsy hohadinoina mandrakizay i Srebrenica, indrindra ho an'ireo taranaka hoavy. Amin'ny tenin'ny iray amin'ireo mpilalao ny sarimihetsika, “Tantara tsy tapitra mandrakizay mihitsy i Srebrenica”. Araka izany, mikasa hanatontosa sarimihetsika misongadina i Mehanović . “Mahatsapa aho fa toa tsy ampy ny notantaraiko”, hoy izy.
Nampiasa ny lahateniny mba hanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fitsarana ao amin'ny dingana fampihavanam-pirenena ihany koa i Mehanović. “Raha mahavita heloka ianao, mila mandefa hafatra ho an'ny taranaka hoavy fa tsy afaka hiala maina ianao fa tsy maintsy ho voasazy”, hoy izy
Tamin'ny fikarohana nataony, nampiasa tahirin-kevitra sy tatitra avy amin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena momba ny Ady Heloka Bevava misahana an'i Yogoslavia teo aloha (ICTY) i Mehanović. Napetraky ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1993, nanana ny tanjony voalohany amin'ny fanenjehana ireo nahavita heloka bevava tao Yogoslavia teo aloha ny andrim-panjakana (ICTY). “Nanana mpitsara tsara indrindra avy amin'izao tontolo izao ny ICTY”, hoy i Mehanović nanamarika, “na izany aza, tao anatin'ny roa-polo taona, olona vitsy ihany tamin'izay voasaringotra tamin'ny raharaha Srebrenica no nomelohin'izy ireo”.
Nanamafy ihany koa ny tale fa mbola “sarotra zakaina” hoan'ireo sisa niangana ny toe-javatra.
“Tsy nomena azy ireo ny zo fototra ary miaina amin'ny 5-10 euros isan'andro fotsiny izy ireo. Tsy mikarakara azy ireo ny governemanta, tahaka izany ihany koa ireo olontsotra hafa. Ankehitriny, minia tsy mahita ny olona ary tsy miraharaha ny olana tahaka an'i Srebrenica “. “Mino aho”, hoy izy nanohy, “fa misy ny firaisana tsikombakomba amin'ny fahanginana. Tsy miresaka momba izany zavatra izany ny olona “.
Mino i Mehanović fa mitoetra amin'ny fisian'ny fifanakalozan-kevitra ahafahan'ny olona mianatra miaraha-miaina ny filaminana ao Bosnia rahatrizay. Saingy na dia momba an'i Bosnia sy ny ady Yogoslavy aza ny sarimihetsika dia ho an'izao tontolo izao ny hafatra. “Mampalahelo fa mety hitranga na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra ny horohoro tahaka ny tao Srebrenica”, hoy izy nanazava.
“Tsy avelantsika hitranga intsony izany”, hoy izy namarana.